I-Fibromyalgia kunye ne-Gluten: Ngaba i-Gluten-equkethe ukutya kunokubangela ukudumba emzimbeni?
I-Fibromyalgia kunye ne-Gluten: Ngaba ukutya okune-gluten-equlethwe kungakunika ukuvuvukala okungakumbi emzimbeni?
I-Fibromyalgia kunye noGluten
Abantu abaninzi abane-fibromyalgia baphawula ukuba basabela kwi-gluten. Phakathi kwezinye izinto, abaninzi banoluvo lokuba i-gluten ibangela ukuqina kwentlungu kunye neempawu. Apha sijonga ukuba kutheni.
Ngaba ukhe waphendula xa usiva ukuba imeko ibaxekile xa uthe wafumana isonka esingenagwele kunye nesonka esikhulu kakhulu? Emva koko awuwedwa!
Ngapha koko, izifundo ezininzi zophando (1) kude kube ngokugqitywa kwento yokuba iimvakalelo ze-gluten ziyinto enegalelo kwi-fibromyalgia. Ngokusekwe kolo phando, baninzi abacebisa ukuba uzame ukusika i-gluten ukuba unayo i-fibromyalgia. Kule nqaku uza kufunda ngakumbi malunga nokuba abo bane-fibromyalgia banokuchaphazeleka njani yi-gluten- kwaye mhlawumbi kunjalo Uninzi lolwazi luya kumangalisa.
UGluten uyichaphazela njani iFibromyalgia?
UGluten yiprotein esiyifumana ikakhulu kwingqolowa, kwirhasi nakwirhasi. IGluten ineepropathi ezenza ukuba iihormoni zidityaniswe nokuziva ulambile, oko kuthetha ukuba utya kakhulu kwaye uphuhlisa "ukunqwenela okumnandi" ngaphezulu kwemithombo yamandla akhawulezayo (iimveliso ezineswekile eninzi namafutha).
Xa i-gluten ityiwa ngumntu obenovakalelo lwe-gluten, oku kubangela ukusabela okungaphezulu kwabo, okunokuthi kubangele ukuvela okungapheliyo kwithumbu elincinci. Le yindawo apho izakha mzimba zingena emzimbeni, kungoko ukubonakaliswa kwale ndawo kukhokelela ekucaphukisweni nasekufumaneni kancinci kwezondlo. Yeyiphi ikhokelela kumandla amancinci, imvakalelo yokuba isisu sidumbile, kunye namathumbu angatshatanga.
Iingcebiso zekhonkrithi zeMpilo eNgcono yeBhele:
Uninzi lwethu lwamalungu angaphezu kwe-29500 kwiqela "i-Rheumatism and Chronic Pain" axela iziphumo zezongezo ezithile. Zama isibonelelo nge probiotics (Iibacteria ezilungileyo) Isisu seLectinect. Kwabaninzi, kunokuba nefuthe elihle, kwaye siyazi nokuba impilo yamathumbu ibaluleke kakhulu kwindlela oziva ngayo ngenye indlela-zombini ngokwamandla, kodwa nakwimood.
Ukuvuza kudonga olunamathumbu amancinci
Abaphandi abaninzi babhekisa "kuvuza emathunjini" (2), apho bachaza indlela ukuphendulwa kokuvuvukala emathunjini amancinci kunokukhokelela ekulimazeni udonga lwangaphakathi. Bayakholelwa ukuba oku kunokubangela ukuba amasuntswana athile okutya aqhekeze iindonga ezonakalisiweyo, oko ke kubangele iimpendulo ezikhulu zokuzimela. Ukuphendula okuzenzekelayo kuthetha ukuba amajoni omzimba ahlasela iinxalenye zeeseli zomzimba. Yeyiphi, ngokwendalo, ayinethamsanqa ngokukodwa. Oku kunokukhokelela ekuphenduleni okuvuthayo emzimbeni-kwaye ke kuyonyusa iintlungu kunye neempawu ze-fibromyalgia.
Iimpawu zokuTyhila kweNkqubo ye-Intestinal
Nazi ezinye zeempawu eziqhelekileyo ezinokuthi zihlangane rhoqo ngokuvuvukala komzimba:
Ixhala kunye neengxaki zokulala
Ukugaya indlala (kubandakanya i-acid reflux, ukuqunjelwa kunye / okanye urhudo)
Ukuphazamiseka kwengqondo (kubandakanywa) ifibrotåke)
Ubuhlungu kuMzimba wonke
Ukudinwa kunye nokudinwa
Ubunzima bokugcina ubunzima obufanelekileyo
Ukwanda kwesifo seCandida kunye neFungal yosulelo
Ngaba uyayibona intambo ebomvu ehambelana noku? Umzimba usebenzisa isixa esikhulu samandla ukunciphisa ukudumba emzimbeni- kunye negluten kunceda ukugcina iimpendulo zokukrala (kwezo zinobuntununtunu besifo kunye nesifo se-celiac). Ngokunciphisa ukudumba emzimbeni, umntu unakho, kubantu abaninzi, ukunceda ukunciphisa iimpawu kunye nentlungu.
Amanyathelo okuchasana nokuvuvukala
Ngokwemvelo, indlela yokuhamba kancinci ibalulekile xa utshintsha indlela otya ngayo. Akukho mntu ulindele ukuba usike yonke i-gluten kunye neswekile ngexesha lemini, kodwa kunokuba uzame kancinci kancinci ukuhla. Kwakhona zama ukusebenzisa probiotics (iibacteria ezilungileyo) kukutya kwakho kwemihla ngemihla.
Uyakufumana umvuzo ngohlobo lokuphendula okungaphantsi kokuvuvukala kunye neempawu ezincitshisiweyo. Kodwa kuyakuthatha ixesha-ngelishwa akukho mathandabuzo ngaloo nto. Ke apha kuya kufuneka uzinikele kutshintsho, kwaye yinto enokuba nzima kakhulu xa umzimba wonke ubuhlungu ngenxa ye-fibromyalgia. Abantu abaninzi bavakalelwa kukuba abanayo imali yokwenza oko.
Kungenxa yoko le nto ndicela ukuba uthathe inyathelo ngenyathelo. Umz. Ukuba utya ikhekhe okanye ipipi amaxesha amaninzi evekini, zama ukunciphisa ukuya kuphela ngeempelaveki. Zibekele usukelo kwaye uluthathe, ngokwenyani, kancinci kancinci. Kutheni ungaqali ngokungena udinwe yokudla?
Ngaba uyazi ukuba umthambo ojongwa ngokusemgangathweni ulwa nentsholongwane? Kungenxa yoko le nto siye saphuhlisa zombini iinkqubo zokuhamba kunye namandla ijelo lethu le-YouTube kwabo bane-fibromyalgia kunye ne-rheumatism. Sibeka i-BIG PRICE malunga nokuba uyarhuma (simahla) -kwaye uyakukhumbuza ukuba kuya kubakho iinkqubo ezininzi ezilungileyo apho kwixesha elizayo.
Ukuziqhelanisa nentshukumo efana nokuchasana nosulelo
Uphando lubonise ukuba umthambo kunye nokuzivocavoca kuneziphumo ezichasayo zokuvuvukala ngokuchasene nosulelo olungapheliyo (3). Siyayazi nendlela ekunzima ngayo ukufumana ii-rhoqo iinkqubo zokuzilolonga xa une-fibromyalgia ngenxa ukuvuleka-ups kunye neentsuku ezimbi.
Ke ngoko sinayo, eyethu I-chiropractor Alexander Andorff, yenze inkqubo ethambe kwaye enobuntu obungaphezulu kwe-rheumatics. Apha ubona imithambo emihlanu enokwenziwa yonke imihla kwaye abantu abaninzi banamava anikezela isiqabu kumalungu aqinile kunye nezihlunu ezibuhlungu.
Sikhankanye ngaphambili ukuba ukuvuvukala kuchaphazela njani kwaye kudlala indima ephambili kwi-fibromyalgia, kunye nezinye i-rheumatism. Ukwazi okuncinci malunga noko ufanele nokungafanele ukukutya kubalulekile ke. Sincoma ukuba ufunde kwaye ufunde ngakumbi malunga nokutya kwe-fibromyalgia kwinqaku esilinxibelelanise apha ngezantsi.
I-Fibromyalgia ibangela ukuvela kweempawu ezahlukeneyo kunye neentlungu- kwaye ke ngoko ziya kufuna unyango olubanzi. Ngokuqinisekileyo ayimangalisi into yokuba abo bane-fibro basebenzise ngaphezulu iipilisi zentlungu- kwaye bafuna ukulandela ngakumbi ngomzimba okanye ugqirha wezonyango kunabo bangachaphazelekanga.
Uninzi lwezigulana zisebenzisa iindlela zokuzilungisa kunye nonyango olucinga ukuba luzisebenzela ngokwazo. Umzekelo, i-compress ixhasa kunye iibhola point kubangela, kodwa kukho nezinye ezininzi iinketho kunye nokukhethwa. Sikwacebisa ukuba uzibandakanye neqela lakho lenkxaso lasekuhlaleni - unokuzimanya neqela ledijithali elifana neli liboniswe ngezantsi.
Aezicetyiswayo zokuzinceda kwi-fibromyalgia
Uninzi lwezigulane zethu zisibuza imibuzo malunga nokuba bona ngokwabo banokuba negalelo njani ekunciphiseni intlungu kwiimisipha kunye namalungu. Kwi-fibromyalgia kunye ne-syndromes yeentlungu ezingapheliyo, sinomdla ngokukodwa kumanyathelo abonelela ngokuphumla. Ngoko ke sincoma ngovuyo uqeqesho kwichibi lamanzi ashushu, yoga kunye nokucamngca, kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla mat acupressure (qalisa inqaku lemat)
amacebiso: -cofa mat (Ikhonkco livula kwifestile entsha)
Oku kunokuba ngumlinganiselo ogqwesileyo wokuzilinganisa wena ophethwe kukuxinezeleka kwemisipha okungapheliyo. Le mat ye-acupressure esidibanisa apha nayo iza ne-headrest eyahlukileyo eyenza kube lula ukufikelela kwimisipha yentamo eqinile. Cofa kumfanekiso okanye ikhonkco apha ukufunda ngakumbi ngayo, kunye nokubona amathuba okuthenga. Sincoma iseshoni yemihla ngemihla phakathi kwe-20 kunye ne-40 imizuzu.
Eminye iMilinganiselo yokuSelf-Rheumatic and Chronic Pain
IArnica cream okanye isixhobo sokufudumeza ubushushu (inokunceda ukunika isiqabu kwiintlungu)
Sikucela ngobubele ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngebhlog yakho(Zive ukhululekile ukudibanisa ngqo kwinqaku lethu okanye iwebhusayithi vondt.net). Siphinda sitshintshiselane ngeewebhusayithi ezifanelekileyo (nxibelelana nathi ngomyalezo nge-Facebook ukuba ufuna ukutshintshana ngekhonkco kwiwebhusayithi yakho okanye ibhlog). Ukuqonda, ulwazi ngokubanzi kunye nokugxila okwandileyo ngamanyathelo okuqala obomi obungcono bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezinganyangekiyo.
Umthombo: Ipapashiwe (Jonga eyakho imithombo kwisicatshulwa)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgi-og-gluten.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2020-02-18 17:36:512022-03-22 15:12:20I-Fibromyalgia kunye ne-Gluten: Ngaba ukutya okune-gluten-equlethwe kungakunika ukuvuvukala okungakumbi emzimbeni?
-Ukuphila ne-Ankylosing Spondylitis Iingcebiso ezili-9 zokulala ngcono ngeFibromyalgia